Yuhuudi weeraray madaxweyne Farmaajo: Maxaa ina soo geliyay?? - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Yuhuudi weeraray madaxweyne Farmaajo: Maxaa ina soo geliyay??
Yuhuudiga isku sheega inuu falanqeeyo arimaha Carabta iyo Yuhuuda ayaa bartiisa baraha bulshada ku weeraray madaxweyne Farmaajo oo markii ugu horeysay si adag uga Hadley dawlad-diidka iyo argagixisada iswata oo kordhiyay qarxinta iyo hantida shacabka ee la burburinaayo.
Yuhuudigan oo aan la garanayn cida u turjuntey hadalkii madaxweyne Farmaajo ayaa bartiisa baraha bulshada ku qorey hadalka ah ”isagu waa madaxweyne Farmaajo waa madaxweynaha Somaliya wuxuu shalay galab shacabka Somaliyeed ku tilmaamey argagixiso sidii Qadaafi iyo Mubaarak iyo sidii dhamaan madaxda Carabta yeeli jireen.
Sidaan ognahay waxa Somaliya dawladeeda si xun u caaya wadamada Imaaraadka, Sucuudiga, iyo Yuhuuda oo xulafo ah maadaama dawlada Somaliya dhexdhexaad ka noqotey arinta Qadar.
Qadar lafteeda ayaa xiriir hoose la leh Yuhuuda. Waxase Yuhuudigan si gaara uga caraysan yahay nin masuula oo ka shaqayn jirey wasaarada arimaha dibedda oo dalbadey in xiriir lala sameeyo Yuhuuda kadibna laga cayriyay shaqada.
Lama garan karo in ninkaasi hadda Yuhuudu shaqo siin doonto ama basaas u noqon doono hoose sida ka dhacda Carabta.
Gabar Somaliyeed oo feedhyahana oo garaacdey Kiiniyaati
Gabadh Somaliyeed oo feedhyahana ayaa garaacdey mid Kiiniya ...